Famerenana katsa-bato :: Mihantona noho ny fifidianana loholona ny an’ireo kaominina sasany • AoRaha
Famerenana katsa-bato Mihantona noho ny fifidianana loholona ny an’ireo kaominina sasany
Vao didim-pitsarana valo ambin’ny folo amin’ireo fitoriana dimy amby enimpolo sy efajato voarainy, mikasika ny fanoherana ny voka-pifidianana ben’ny tanàna, tamin’ ny 27 novambra 2019, no navoakan’ny Filankevi-panjakana, hatramin’ny omaly. Fitoriana fito amby efapolo sy efajato no miandry didy, amin’izao fotoana izao, noho ny fiatoana nateraky ny hamehana arapahasalamana. Aorian’ny fifidianana loholona mihitsy indray vao azo haverina ireo fifidianana nahitana tsy fahatomombanana na tsy nahitàna kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsaina.
«Efa nanomboka niverina ny fitsarana an’ireo raharaha momba ny fifidianana kaominaly. Hoezahina ny hamitana azy haingana, mba hahafahana miroso amin’ny fifidianana loholona», hoy Rakotomandimby Benjamin, Kaomiseran’ny lalàna eo anivon’ny Filankevi-panjakana, tamin’ ny antso an-tariby, omaly.
Telo andro isaky ny herinandro no hitsaran’ny Filankevi-panjakana an’ireo raharaha fifanolanana tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna, dia ny talata sy ny alarobia ary ny alakamisy.
Miankina amin’ireo didy havoakan’ny Filankevi-panjakana no mety hiovan’ny lisitr’ ireo mpifidy vaventy, izay harafitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) amin’ny fifidianana loholona, ny 11 desambra 2020.
“ Esorina ao anatin’ny lisitra izay kandidà lany tamin’ny fifidianana kanefa mila haverina araka ny didin’ny Filankevipanjakana. Hampidirina ao anatin’ny lisitr’ireo mpifidy vaventy kosa izay kandidà ankatoavin’ny Filankevi-panjakana, aorian’ny fikirakirany an’ ireo fitarainana tamin’ireo vokapifidianana tamin’ny kaominina sasany ireo», hoy ny fanazavan’ny mpampaka-tenin’ny CENI, Rakotondrazaka Fano.
Kaominina efatra amby roapolo no tokony hamerenana fifidianana ben’ny tanàna na/sy mpanolotsaina manerana an’i Madagasikara, taorian’ny vokatra ofisialy navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana. Ny Filankevi-panjakana ihany anefa no tompon’ny teny farany momba izany.